Waa Sidee Xaalada Dhuusamareeb Iyo Guriceel - Bandhiga Media
Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug waxaa ka socda dagaal ku 6-Saac, waxaana wali la maqlayaa rasaasta ay isku ridayaan Ciidamada Dowladda gaar ahaan Haramcad iyo kuwa Ahlu sunna.
Labada Ciidan ayaa isku adeegsanaya Hubka fud-fudud iyo kuwa gaadiidka dagaalka, waxaana jira Khasaare Naf iyo Mid maaliyaeed oo kala gaaray dhinacyada saacadaha badan ku dagaalamay Dhuusamareeb.
Waxaa la daweynayaa dad waxyeelo gaartay oo Dhowr iyo toban qof ah, halka dhinteen dadkale oo ku dhaw 10-ruux oo isugu jira Ciidamada Dagaalamaya iyo Dadka deegaanka sida bandhiga ay u sheegeen Ilo wareedyo ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Galmudug.
Khasaaraha intaa ka badan kara, maadaama dagaalka uu wali ka socda Magaalada Dhuusamareeb, lana maqlayo rasaastada ay isku ridayaan dhinacyada dagaalamaya.
Sidoo kale Wararka laga helayo degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyey Ciidanka Dowladda iyo kuwa Ahlusunna Wal-jamaaca,kaas oo geystay khasaaro kala duwan.
Dagaalka ayaa yimid,kadib markii duhurnimadii Maanta ay Saldhiga Booliska degmada ay la wareegeen Ciidamo ka tirsan kuwa Ahlusunna,waxaana dagalkooda uu salka ku haayay dagaalka Maanta iyo xalay ka dhacay Magaalada Dhuusamareeb
Dhanka kale, waxaa baaqyo Nabadeed loo jeediyay Dowladda Federaalka iyo Ahlu Sunna oo Ciidamadooda ku dul dagaalamayaan Shacabka kunool Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Soomaaliya ahna Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa, Xildhibaanno kasoo jeeda Deegaanada Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada ayaa soo jeediyay in shuruud la’aan dagaalka la joojiyo, wax walibana lagu dhameeyo Miiska Wada hadalka.